Antsoy @ + 91-993.702.7574 hahafantarana ny 15 ho an'ny Pricing 25 Seater Tempo amin'ny Bhubaneswar
Mitady fiara tsy mandeha maimaim-poana any amin'ny toerana misy anao, ao Bhubaneswar? Sand Pebbles'Ac Tempo Traveler Price amin'ny Bhubaneswar dia tsy isalako ny tsara indrindra. Ny serivisy azonao dia ny tsara indrindra ao an-tanàna. Ny fampiantranoana ny Tempo Traveler dia fomba tsara iray hodiavina raha misy ianao mandeha amin'ny vondrona. Ak Tempo Traveler dia mety ho ny fiara lehibe indrindra ho an'ny lavitra / lavitra lavitra lavitra na fitsangatsanganana hafa. Sand Pebbles dia manolotra ny tsara indrindra ny Tempo Traveler Traveler ao Bhubaneswar. Manolotra karazana Tempo Traveler ho an'ny hofan-trano izahay, toa an'i Tata Winger 15, 17, 19, 21 seza. Ny ekipanay dia hanampy anao hamolavola ny dianao tonga lafatra tsy misy olana. Ny mpamily antsika dia manana fahalalana lalina, manao izay hahamora ny fandehananareo amim-pahombiazana. Tsidiho ny vidin'ny mpizahatany Tempoly ao Bhubaneshwar mba hahitana ny serivisinay. Manana heviny sy ezaka be dia be isika mba ho fahafaham-po amin'ny mpanjifa mba hahafahan'izy ireo manana dia lavitra sy miala sasatra.
Nitsidika an'i Odisha voalohany? Sa misy andro fialan-tsasatra nalefa? Tokony hanakarama mpandeha 25 Seater Tempo ianao raha mandeha ao anaty tarika. Sarotra be ny mahita an'i Odisha, ny fampiasana Tempo Traveler dia fomba tsara indrindra hivoahana sy hijerena ny zava-drehetra. Matokia ny fiarovana sy ny fialan-tsasatrao, mandritra ny dia, satria ny fiara rehetra dia hodinihina tsara alohan'ny hanofana.
24 ora Service- Manolotra ny serivisy 24 ora ho an'ny mpanjifanay rehetra izahay, tsy misy fahatarana. Anisan'ny mpizahatany tsara indrindra amin'ny Bhubaneswar izahay, manome tolotra tsara ho an'ny mpanjifanay.
Quality- Manolo-tena foana izahay hanompo ny mpanjifanay manana fahafaham-po be indrindra. Ny Tempos anay rehetra dia ny kintan'ny 5 voamarina. Izahay irery no orinasan'ny fitaterana entana any India miaraka amin'ny loka mendrika ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny The European Foundation for Quality Management.
Fanofanana sy fiarovana ara- Manome toky izahay fa manana fiofanana sy fanombanana araka ny tokony ho izy ny mpamily alohan'ny fikarakarana mpanjifa. Manome toky izahay fa manana fiofanana voalohany amin'ny fanampiana ireo loza ireo ny mpamily. Isaky ny mandeha ny fotoana isaky ny miala ny trano.